नयाँ दैनिक | जीवनशैली जीवनशैली – नयाँ दैनिक
आउँदो २६ गते प्रचण्डले फेरि बिहे गर्ने
बैशाख २२, काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ५० वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नै श्रीमति सीतासँग फेरि विवाह गर्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो बैशाख २६ गते पुनः विवाह गर्न लागेका हुन् । २०२६ साल वैशाख २६ गते प्रचण्ड र सीताको विवाह भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले विवाहम...
पैसा जोगाउन यसो गरौँ
बैशाख ५, काठमाडौँ । हामी सबैको एउटै चिन्ता हुन्छ 'पैसा कमाउन सके पनि बचाउन किन सकिन्न ?' तपाइले पैसा बचाउन चाहनु हुन्छ भने अब यी उपाय अपनाउन सक्नुहुनेछ ।
तपाईले पैसा बचाउन चाहान हो भने सबैभन्दा पहिला जाँगर चलाएर हरेक द...
रवि लामिछानेले गरे अर्को विहे
माघ ७, काठमाडौँ । पत्रकार रवि लामिछानेले अर्को विवाह गरेका छन् । केही साताअघि मात्रै श्रीमती इशा श्रेष्ठसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका रवीले आज अर्को विवाह गरेका हुन् । निकिता यसअघका पतिसँग सम्बन्ध विच्छेदपछि एक्लै थिइन् । यी दुईबीच केही महिनायता अफयर रहेको र बिहे गर्ने योजनाअनुसार इशासँग रवीले सम्बन्धविच्छेद गरेको चर्चा चलेको थियो...
विद्यार्थी नेताको चिन्ता : हलो जोत्न कोही तयार छैन !
माघ ३, काठमाडौँ । विद्यार्थी नेता नरेश रेग्मीले कृषिमा नयाँ पुस्ताको चासो नगएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खेत बाँझो राख्नेलाई तीन लाख जरिवाना त के फाँसीकै सजाय तोके पनि अझै हिजोआजका पुस्ता कृषि पेशा तयार हुने नदेखिएकोमा रेग्मीको चिन्ता हो । ‘यो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर जति नै रटान रटाए पनि आजको ठूलो हिस्सा हलो जोत्न वा ट...
पुस २५, काठमाडौँ । आजभोलि चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने थप चर्चामा छन् । श्रीमतीसँगको सम्बन्ध विच्छेदको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको चर्चा मात्रै होइन, आलोचना पनि भैरहेको छ । यो विषयले उनको छविमा पनि नराम्ररी आँच आयो । उनको पारिवारीक निजी विषय सार्वजनिक चासो र चर्चाको पनि विषय बन्न पुग्यो । यसको कारण उनका समर्थक र विरोधिको संख्या ...
रवि लामिछानेको डिभोर्स, कारण खोलेनन्
पुस २०, काठमाडौं । पत्रकार रवि लामिछानेले श्रीमति ईशासँग डिभोर्स गरेका छन् । करिब २५ वर्ष लामो सम्वन्ध रविले केही दिनअघि मात्रै अन्त्य गरेका हुन् । रवि र ईशाका दुई छोरी छन् । दुबै छोरीको जिम्मेवारी आफूले लिएको उनले जानकारी दिए ।
डिभोर्सपछि ईशा एक हप्ता अगाडि अमेरिका फर्किसकेकी छन् । रविले श्रीमतीसँग डिभोर्सको कारण भने ...
पुस १७, काठमाडौँ । आज पुष कृष्ण एकादशी । सन् २०१९ को आरम्भ भएको दिन । त्यतिमात्रै होइन, आज ‘टोपी दिवस’ भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । ढाका टोपी लगाएर तस्विर खिचाउँदै सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना दिएको प्रशस्तै देखिन्छ । यद्यपि अंग्रेजी नयाँ वर्षकै दिनसँग भने टोपी दिवसको ‘१२ हातको साइनो’ पनि छैन । ढाका टोपीले चिसो नछेक्ने भएकोले मौसम...